Ukukhanya kwebhayisikili yingxenye ebalulekile yale moto. Lokhu kuyisidingo esibalulekile uma ubusuku buhamba noma buhamba ebumnyameni kwenziwa. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngesikhathi sehlobo sasebusika. Kuqala ukukhanya, kodwa ufuna ukuhamba ngebhayisikili. Futhi, lokhu kungukuphepha okungeziwe kubo bonke abasebenzisi bomgwaqo. Ukukhanya okunje kuvame ukuphakama amabhayisikili ezingane. Lokhu kuvumela ingane ukuba izwe njengomshayeli wamabhayisikili wangempela, ngisho noma ineminyaka engama-ubudala kuphela. Angakwazi ukuvula nokuvala izibani ezikhanyayo ngokwakhe.
Kunezinketho eziningi zokuhlala:
I-front on the wheel is option option yokuhlala, kodwa hhayi ehamba phambili. Ukukhanya kunesimo sebala, nge-angle of incidence ephuma ngenxa yalokho, ukukhululeka komgwaqo akubonakali kahle.
Ngaphambi kwemfoloko - le ntaba inikeza ukukhanya okungaphezulu, kunomumo we-ellipse ende, okukuvumela ukuba ubone kangcono umgwaqo.
Ngaphambili emfoloko, zombili izinhlangothi - ukukhanya kwebhayisikili, okubekiwe ngale ndlela, kungakhanyisa umgwaqo ngangokunokwenzeka. Ukufakwa okunjalo kusetshenziselwa ukushayela ebusuku kusizinda esinzima.
Uma ukukhanya komsila kufakwe ebhayisikili, lokhu kusiza ukubona umqhubi wamabhayisikili emgwaqweni.
Yiqiniso, ungasebenzisa izintambo, kodwa ukusetshenziswa kwamaconsili kuyindlela eyoqinisekisa ukuphepha okuphezulu. Lezi yizinketho zokuhlala eziyinhloko. Ngaphezu kwalokho, uma ufisa, ungafaka eyengeziwe efoleni, endaweni yesondo elingemuva noma esiteshini sokuqondisa. Futhi, ukukhanya kwebhayisikili kungabizwa ngokuthi i-flashlight esihlokweni sebhayisikili.
Ziyini izakhi zokukhanyisa?
Ukukhanyisa kwamanje kwebhayisikili ngokuvamile kune-LED eyodwa, ehlinzekwa ibhetri noma ibhetri. Ukukhanyisa okunjalo kungaba nobukhulu obuhlukene nokuhlela amacebo. Ngokuyinhloko itholakala ngezigqoko ezikhethekile kwivili. Esikhundleni sezimpawu zokubheka ngebhayisikili ngebhajethi esilinganiselwe, izibani ezikhanyayo zamandla ahlukene futhi, ngokufanayo, zamandla ahlukene alula angenza. Zibekwe esiteshini sokuqondisa ngakwesokunxele sendawo ephakathi.
Kukhona amabhayisikili akhethekile, abakhiqizi abacabangela zonke izidingo zamabhayisikili: ukuhamba okuqhamuka okukhulu, umsebenzi obalulekile wokusebenza, i-casing kanye neglasi engokwethenjelwa, izinsimbi ezilula, kunezimo eziningana zokukhanyisa. Futhi kunezinhlobonhlobo zezibani zokukhanya ze-dynamo. Lokhu kusho ukuthi ukukhanya kubonakala ngokuhamba kwesondo lebhayisikili. Ubukhulu bokukhanya buxhomeke ngqo kwijubane lokunyakaza. Zine-plus plus - azidingi ukulawulwa kwecala lamabhethri, nakuba abanye abathanda imoto bacabanga ukuthi lokhu kukhanya kube yikhulu lokugcina.
Izici zezingemuva zangaphambili nezibani
Ukukhanya kwebhayisikili kungadlala injongo ehlukile kuncike kokulungiselelwa. Ngakho, ngaphambili kukhanya indlela, futhi ngemuva kukhanya imoto emgwaqweni. Ngakho-ke, ukukhanya kwesikhanyiso kufana nalokho kwemoto - kungenzeka kube nokukhanya okuphuzi noma okumhlophe. Inani le-LED noma ezinye izakhi zokukhanyisa likhawulelwe kuphela ngesifiso namakhono omnikazi. Umsila ukhanyisa ngebhayisikili (ilanga lokuphepha) linokukhanya okubomvu okungeke kuvumele ukuba umqhubi wamabhayisikili ahlale engabonakali. Yifake kufanele ibe endaweni enjalo ukuze kuthi lapho ukuhambisa ukukhanya kwayo akukho okuphazamisayo. Ubukhulu bayo bungaba buhluke - kusukela ku-LED eyodwa ukuya emashumi amaningana. Ngokuqondene nezinye izibani ezengeziwe, zingase zihluke ekuqondeni kwebhayisikili. Wonke umuntu angaba nezinhlobo ezahlukene nezinamathiselo.
Izinzuzo zesikhanyiso sokuzenzela
Ukukhanya kwebhayisikili, eyenziwe ngokuzimela, kubaluleke kakhulu. Ekuphepheni, awukwazi ukulondoloza, kodwa ukuthenga ilanga elikhethekile lamabhayisikili kuyodala kakhulu, ngaphandle kwalokho, akuqinisekisi izinga elihle kakhulu.
Njengoba wenze ukukhanyisa ngezandla zakho, ungacabangela zonke izidingo nezifiso mayelana nokukhanya, izinketho zokufaka kanye nokunikezwa kwamandla. Izinto ezidingekayo zokukhiqiza ukulungiswa kokukhanyisa ibhayisikili zingathengwa kunoma yisiphi isitolo sokukhanyisa.
Ukwakhiwa kwekhanda lokukhanya
Ungenza kanjani ukukhanya ebhayisikili? Izingxenye ezilandelayo kuzodingeka kulokhu:
Ama-LED enani elidingekayo kwimeko ethile.
I-collimator, inikeza ukukhanyisa ezinhlangothini.
Amabhethri uhlobo AA noma amabhethri.
Inqubo yokukhiqiza kufanele iqale ngokufaka i-collimator ku-lens. Okulandelayo, lo mklamo kufanele uboshwe nge-tape kagesi bese wenza izimbobo zokususwa kwezintambo. Lezi zinsuku zihamba kahle kakhulu kunomshini, okwakuthiwa uxhumeke namabhethri noma amabhethri. Khona-ke udinga ukufaka ukukhanya okukhanyayo endaweni efanele.
Amaphuzu we-tricycle ekhethekile
Okumangalisa ukuthi ama- tricycles nawo angabantu abadala. I-tricycle ene-lightlight idinga imithombo eyengeziwe yokukhanyisa, umsebenzi oyinhloko okuzobekwa ukuchaza ubukhulu bezimoto ezinjalo. Ngokuvamile, izinyunithi ezinjalo ziyathutha izidakamizwa ezinokudla noma ezinqoleni zokuqala zokudayiswa kwezimbali, amathoyizi, izikhumbuzo. Ngenxa yokuthi zivame kakhulu ezindaweni zokuvakasha, zivele zidinga umsila, phambili nangaphezulu. Njengoba izobe ikhanya kakhulu futhi ikhangayo kusuka ngaphandle.
I-tricycle ene-lightlight ifakwe ukukhanya okunamandla. Uma ukukhanyisa kwangaphambili kufakiwe, njengokwejwayelekile (esiteshini sokuqondisa, ngaphezu kwefoloko noma kuso), ngemuva kwalokho kungcono ukuphakanyiswa kwesakhiwo endaweni yesondo elingemuva, noma ngemuva kwebhasikidi. Indawo evamile ebhukwini phakathi kwesihlalo kanye nohlaka kungavalwa, futhi umsebenzi oyinhloko wezinkinobho ezinjalo ngeke zenziwe - ukubizwa komqhubi wamabhayisikili emgwaqweni.
Amabhayisikili ezingane ane-spotlight
Ngokuvamile abakhiqizi bamabhayisikili ezingane bawahlomisa ngesikhanyiso ukuze umqhubi wamabhayisikili omncane abe nomuzwa wokuthi ungumsebenzisi wangempela womgwaqo. Ukwakhiwa kwamadivaysi okukhanya kuwo kuhlukile kakhulu. I-tricycle yezingane enekhanda elidinga ukukhanya akudingi ama-LED anamandla kakhulu nesistimu yokuphepha eyinkimbinkimbi, enikeza ukukhanya okubomvu ngemuva - lokhu kuyisesekeli esengeziwe kuphela. Emva kwakho konke, ingane eneminyaka emihlanu ubudala, kuze kube yilapho injalo imathoyizi enjalo ibalwa, ngeke ihambise emgwaqweni futhi ayikho isidingo sokuziveza ngokucacile emgwaqweni.
Ngaphezu kwalokho, izimoto ezinjalo zisetshenziswe ikakhulukazi emagcekeni, amapaki, izindawo zokudlala kanye nokuphathwa kwabantu abadala kuphela. Ezimweni eziningi, i-headlamp ebhayisikili enjalo ifakwa ngqo kwi-handlebars. Njengoba kushiwo ngaphambili, ayinayo inzuzo ekhethekile yokusebenza, ngakho-ke ingafakwa esitokisini sokushayela ithoyizi.
Amandla Ekhanda Amabhayisikili
Iningi lezinhlobonhlobo zezibani zokuhamba ngebhayisikili zinikwe amandla ngamabhethri. Lokhu kulula kakhulu, ngoba bangakhokhiswa ngokuphindaphindiwe. Futhi uma izibani zebhayisikili ezindala zizoguqulwa uma kudingeka, khona-ke ibhayisikili lezingane elinokukhanyisa nomshayeli omncane ukuthi uma efuna, bese uvala futhi uqhubeke, udinga ukuhlomisa ngamabhethri okugcina. Bangakwazi ukugqoka nawe kuphela uma kwenzeka. Ngempela, ingane ekhungathekile, futhi yilokho okuyoba khona uma engakwazi ukuvula ukukhanya kwebhayisikili yakhe - lokhu "ukuduma kwamachibi nolwandle".
Ngokuqondene nezici zobuchwepheshe zamabhethri, kufanele agcine ubuncane bokukhanya okungama-2,000 okukhanya. Izakhiwo ezinjalo zinamabhethri ohlobo lwe-18650, amavolumu athile angu-3,4V, amandla - kuze kube ngu-5000 mA / h. Amabhethri amaningi, isikhathi eside siyokwazi ukushayela ekugqeni noma ebumnyameni. Ngesitokisini, ungaba namabhethri ajwayelekile AAA, okuhlanganisa ngokuyi-cartridge ekhethekile akwazi ukuqhathanisa nebhethri eyodwa enezici ezichazwe ngenhla.
Ngokuvamile, i-fasteners ye-headlamp ine-plastamass base, ehlanganiswe nesibhawuti, ngaphezu kwefoloko, ngokuqondile kuso noma esihlalweni sobuhlalo (ngezibani zangemuva) futhi sinomgomo wokuqinisekisa izikhalazo. Futhi lokhu kusho ukuthi ifakwe endaweni yayo futhi iphoqe ngamabhotshi wokulungiswa okunokwethenjelwa. Izibopho ezinjalo zibhekisela ngokuyinhloko ekusetshenzisweni kwezibani ezikhanyayo njengezibanikezi.
Ngokuqondene nezibani ezihamba phambili zebhayisikili eziphathekayo, amamodeli asevele ehlinzeka ngokushelela okulula, ngaphezu kwalokho, yenzelwe ukunyakaza okuqhubekayo. Lokhu kusho ukuthi umshayeli wamabhayisikili angashiya imoto yakhe endaweni yokupaka, asuse isikhanyiso futhi asithathe naye, njengoba kubiza kakhulu, kepha isilingo samasela asifuni ukulingwa. Kukhona namamodeli ebhayisikili afakwe ukukhanya okuklanyelwe ngaphakathi. Ngokuvamile lokhu kuyindlela yokukhetha izingane - isibonelo, ibhayisikili i-Azimut Lamborghini, ukukhanya kwayo kukhishwa esiteshini sokushayela, kufana nalokho okufakiwe kwi-mopeds noma ngesithuthuthu.
Ukuma kwezibani zokukhanya kungahlukahluka futhi kulinganiselwe kuphela ngesifiso, amathuba kanye nomcabango, ikakhulukazi uma kuthinta amamodeli asekhaya. Imakethe yemikhiqizo enjalo inikeza ukulungiselelwa okuyisisekelo:
Izibani ziyisiyingi nxazonke. Ngokuvamile kaningi kumamodeli anjalo, imithombo eyodwa noma emibili yokukhanya. Esikhundleni salo singenza njengama-diodes alula, ama-xenon, izibani ezingavamile kakhulu zokukhanyisa.
Izibani ziyisikwele noma ziyi-rectangular, izinketho ezinjalo ngokuvamile zenziwe ngokwabo.
Izibani zomsila zizungezile, zinyene, zinezixube. Ziyizikhulu ngobukhulu, ngoba zinomsebenzi obalulekile wokukhombisa umqhubi wamabhayisikili emgwaqweni.
Ngaphezu kwalokho, izibani zomsindo zingashintsha ngosayizi. Ngokuvamile, ama-round round roundings ezithombeni zezingane, ezifana ne-Trike bike (ene-lightlight).
Izinkomba zokukhethwa kwekhanda elifanele
Njengomthetho, izibani nezibani zamabhayisikili zinamakhaya angenawo amanzi. Phakathi kwezinkomba ezibalulekile zokusebenza yilokhu:
Ukukhanyisa kwe-LED - le mithombo iyakwazi ukusebenza izikhathi eziningi kunokuthi, isibonelo, i-halogen. Futhi banakho ikhono lokuzala ukukhanya okulinganayo noma okukhanyayo. Zinamandla kakhulu kunezinye izibani. Yingakho zivame ukusetshenziselwa ukuthutha komncane kunabo bonke. Isibonelo ibhayisikili "i-Lamborghini" enekhanda.
Lumens. I-okuthiwa i-light flux definition unit iyabizwa. Ihlukanisa ubukhulu bokukhanya futhi iyilinganise ngecala elifanayo kusuka entweni.
Ray. Kubalandeli bokushayela ubusika, okukhethwa kukho konke ukukhanya okuphambili, okubhekene nokugxila okuncane kanye ne-factor dispersion factor.
Inketho enhle kakhulu kungaba uma ngabe imodeli inikeza izindlela eziningana zokukhanya okulula nokukhanya. Lokhu kuzobonga kakhulu amandla ebhethri, ngakho-ke qhubeka isikhathi ngaphandle kokuvuselela.
Njengoba kucacile, kunezinketho eziningi zokuhambisa ibhayisikili lakho ngokukhanyisa. Into esemqoka ukuqonda ukuthi isethi esincane esidingekayo ukuthini ukushayela nokunethezeka ngokukhululekile. Zonke ezinye izibani ezengeziwe, izibani nezibani ze-flashlights zingafakwa ngokuthanda futhi zilinganiselwe kuphela ngomcabango womqhubi wamabhayisikili.
Jelly ikhekhe nge izithelo. Jelly ikhekhe ngaphandle baking: iresiphi izithombe
Aglaonema: ukunakekelwa nemibandela yeziboshwa